Ungangibonisa yini ithuluzi lokusesha le-Amazon eliphezulu eliphezulu lamanani?
Ngisho nomkhiqizo ohlosiwe ngokuphelele, cishe akunakwenzeka ukuqala ukulawula leyo ndawo emakethe egcwele ama-Amazon. Ngisho ukuthi umkhiqizo uqobo kanye nokufakwa kuhlu kwakho akunakusiza ukunqoba lo mncintiswano we-cutthroat, ngaphandle kokuthi uphathe isheke elihleliwe lentengo futhi uhlale ulungele noma yikuphi ukuguqulwa noma ukulungiswa kwamanani okwenziwe ngabancintisana bakho, isibonelo uma usebenzisa umkhankaso wokuphromotha kwezinye izinto ezishisayo. Nakhu lapho uzodinga khona ithuluzi lokusesha le-Amazon elilinganiselwe ukulandelela amanani futhi njalo uhlale olusha ngeziphakamiso, kanye nezixwayiso kanye nezaziso. Nazi ezinye amathuluzi amahle kakhulu nezinhlaka ze-intanethi ukubhekana nokukhishwa kwentengo ye-drop-shipping webshop yakho kanye nhlobo.
Kuyinto enhle kubo bonke abathengisi be-ecommerce ngisho nabachwepheshe bokuthengisa nge-digital. Ingasetshenziswa ku-Amazon njengethuluzi lokusesha ukuhlaziywa kwentengo ephelele kanye nokwenyuka kwentengo yomkhiqizo - pc temperature monitor. Kulula, leli thuluzi lenza izinto zibe lula - zingakusiza ukuthi ukhombise inqubomgomo efanele yamanani ukuze kube nokuthengiswa kokuthengisa, futhi ugcine umkhawulo onempilo ngesikhathi esifanayo. Umdayisi Logic ungabuye abe isisekelo esiqinile samaqhinga ayisihluthulelo elandelayo ku-Amazon, njengeBhokisi lokuthenga, isikhundla, ukuthengisa, kanye neNqubo Elinganayo yamanani ukushaya abaphikisi bakho abaseduze kakhulu.
Enye ithuluzi lokusesha le-Amazon ongayisebenzisa ekuhlaziyweni kwentengo ukudala isu sakho sesikhathi esigcwele esisebenza ngendlela esondelene nayo. Zinike amandla ngamaphethini wokuphindaphinda okuzenzakalelayo futhi ubeke indawo ephakeme kakhulu yokuncintisana e-Amazon ngokuqonda okubalulekile ngamanani athengisayo. Kukhona nesici esiyingqayizivele se-platform-platform esiza no-Appeagle, njengoba leli thuluzi lingasiza ngokulinganayo kwamanye amakethe, njengeWalmart.
I-Keepa iyithuluzi lokusesha kanye nokulandelela kwamanani asekelwe emhlabeni, elihlanganisa cishe amazwe angamazwe ahlukene. Phakathi kwezinye izici eziyisisekelo, lolu cwaningo lwe-Amazon nethuluzi lokulandelela libonakala liwusizo kakhulu ngokunginika ngemagrafu yomlando wamanani amanani, ukwehla kwentengo noma izaziso zokutholakala, idatha evulekile yomlando etholakala esipheqululini sami, isheke ngokushesha ngemininingwane yakamuva futhi ukuthambekela kwezindleko, kanye nokuhlaziywa kwe-benchmark elula kakhulu futhi elula ngokudayisa abathengi abaphumelele e-Amazon.
Lena yindlela yokugcina engingathanda ukukukhombisa ngayo namuhla. I-RepricerIngxoxo ihlanganisa okungcono kokuzenzekelayo kokuthengisa ukukukhonza e-Amazon njengethuluzi lokusesha kanye nesofthiwe yokuthuthukisa intengo - konke kokukodwa. Ngokomthuthukisi, lesi sisombululo esibanzi sibheka kuphela idatha yakamuva ukuze usize uhlu lwakho lomkhiqizo ngokufika ku-Thenga Box, futhi lungakwazi ukuhambisa uhlu lwakho lwemikhiqizo kwiBhokisi Lezinketho Ezingaphezulu. Ngithole ukuzuza ukushaya amanani wamanani wabamelene nami ngesamba esithile, yenza umdlalo wamanani osheshayo namathegi wamanani wamanje nje amiswe abathengisi abaphezulu e-Amazon, futhi ukwenza izinto zibe lula ngokunqanda ngenhloso umncintiswano othile wemakethe njengomncintiswano .